ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် Kent (အင်္ဂလန်) ဖြစ်သည် အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် ဗန်ဒီဘီ။ ၎င်းကိုဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ရေပြင်တွင်တပ်ဆင်ပြီးလေတာဘိုင် ၁၁ ခုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ အကုန်ပိုင်းတွင်ကမ်းလွန်လေစွမ်းအားမှာ ၉၀၀၀ ကျော် (MW) ရှိသည်။ ယနေ့အချိန်၌ကမ်းလွန်လေစွမ်းအင်သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အနာဂတ်အတွက်လောင်းကစားများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝအမြတ်အစွန်းမရသောနည်းပညာမဟုတ်သေးပါ။
လက်ရှိတွင်ကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအကြီးမားဆုံးသည် Kent (အင်္ဂလန်) ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပန်းခြံဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏မြှင့်တင်သူများက၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်ရန်စီစဉ်ကြသည် ဒုတိယအဆင့်တွင် 870 MW အထိရှိသည် ဆိုင်းငံ့ထားအတည်ပြုချက်။
ဗြိတိသျှ ၀ န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေးဗစ်ကမ်မရွန် (David Cameron) မှ စတင်၍ ကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် လန်ဒန်ခင်းကျင်း ဇူလိုင်လအတွက်မြစ်မြစ်၏နှုတ်ကိုပယ် 2013ဤအခြေခံအဆောက်အအုံသည်ယနေ့အထိတည်ဆောက်ခဲ့သောအကြီးမားဆုံးကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ဂျာမန်ဖွင့်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းစု၏ပဏာမခြေလှမ်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် EON, ဒိန်းမတ် dong နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မြှင့်တင်ရေးများအတွက်အများပြည်သူလူ့အဖွဲ့အစည်း Masdar အဘူဒါဘီတွင်အခြေစိုက်ပြီး၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအပြည့်ဖြင့်လည်ပတ်နေသည် နေအိမ်တစ်သန်းခွဲ၊ တစ်ခုတပ်ဆင်စွမ်းရည်နှင့်အတူ 630 မဂ္ဂါဝပ်.
လေးနှစ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ထက်ပိုမိုတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြီးနောက်2.200 သန်း ယူရို, ပန်းခြံ၏ဖွင့်ထားသည် 175 Vestas SWT လေတာဘိုင်, ဤရွေ့ကားအင်္ဂလန်၏အရှေ့တောင်ဘက် Kent ကမ်းရိုးတန်းနှင့်အကွာအဝေးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 100 စတုရန်းကီလိုမီတာareaရိယာကိုသိမ်းပိုက်ပင်လယ်အထိတိုးချဲ့။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးတွေနှင့် ကမ်းလွန်ဓာတ်အားခွဲရုံ ၂ ခု၊ အရာအတွင်းပိုင်းမြေပြင်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမတိုင်မီလေတိုက်တာဘိုင်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဗဟို။
ကမ်းလွန်လေစွမ်းအင်တာဘိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်၏အထူးသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရှိသောပုံမှန်လိပ်ခေါင်းများကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အမှုပေါ် မူတည်၍ အနက် ၅ မှ ၂၅ မီတာကြားတွင်ရှိသည်။ ၎င်းအထောက်အပံ့များသည်တာဘိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုရုပ်သိမ်းပေးသည် Vestas SWT-3.6MW-120 ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်း၏အလေးချိန်ကိုထုတ်လွှင့်ရန်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် 225 တန်ချိန် မြေပြင်သို့။
175 လေတိုက်တာဘိုင်တစ်ခုချင်းစီ၏အမြင့်ရှိပါတယ် 147 မီတာ, 90 မီတာ ရဟတ်အချင်းနှင့်တစ်ဓါးအရှည် 58,5 မီတာ။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီမှထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရှိပါသည် 210 ကီလိုမီတာ တာဘိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုကမ်းလွန်ဓာတ်အားခွဲနှစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည့်ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်လ်၊ ကလီးတောင်ကုန်း မှတဆင့်ခြောက်သွေ့သောမြေပေါ်တွင်4ကေဗွီ 150 cable များ သောရောက်ရှိရန် 220 ကီလိုမီတာ အရှည်၏။
ကမကထပြုသူများ၏ခန့်မှန်းချက်များအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လက်ရှိကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည်လေလံဆွဲစက်တစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖော်ပြခဲ့သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ 1,5%, သို့သော် London Array နှင့်အတူဤကိန်းဂဏန်းသည်အထက်မြင့်တက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည် 5% အရှင်၏ထုတ်လွှတ်မှုကိုရှောင်ရှား 925.000 တန်ချိန် နှစ်စဉ် CO2 ။
လေစွမ်းအင်ကိုဥရောပစွမ်းအင်မြင်ကွင်းတွင်လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်လုံခြုံမှုအနည်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကမ်းလွန်လေကြောင့်ဖြစ်လျှင်၊ တာဘိုင်များမှထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်သည်အပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်, စွန့်ပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မြေတူးဖော်ခြင်းမလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်ကမ်းလွန်တည်ရှိသောကြောင့်, ဒါကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ် တိရစ္ဆာန်များအပေါ်လျော့နည်းရန်လို နှင့်သမားရိုးကျလေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသီးအရွက်များ။
London Array သည်လေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၏မျှော်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည် ဟားဟားတစ်ချိန်တည်းတွင်အကြီးဆုံး၏ခေါင်းစဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်တူညီသောinရိယာတွင်တည်ရှိသောအခြေခံအဆောက်အ ဦ တစ်ခု ကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တစ်တပ်ဆင်စွမ်းရည်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာ 500 မဂ္ဂါဝပ်။ သို့သော်ယင်းသည်အားလုံးမဟုတ်ပါ
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှပြုလုပ်သောကမ်းလွန်လေပြင်းတိုက်ပွဲတွင် ဆက်လက်၍ ဆက်လက် ဦး ဆောင်ရန်စိတ်ကူးဖြင့် London Array ကိုမြှင့်တင်သူများသည်လက်ရှိစွမ်းအင် ၆၃၀ မဂ္ဂါဝပ်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုတိုးချဲ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ 870။ ဤဒုတိယအဆင့်သည်အရည်အချင်းရှိသောအာဏာပိုင်များ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုဆိုင်းငံ့ထားသော်လည်းဤလေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့သမျှအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီ 2017 ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်အဖြေရပါလိမ့်မယ်?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ